Adɛn ne Amanehunu Bebrebe Yi? — Ɔwɛn-Aban INTANƐT SO NHOMAKORABEA
bhs ti 11 kr. 116-123
Kenkan wɔ mu
ADƐN NTI NA AMANEHUNU ADƆƆSO SAA?
NEA ENTI A ONYANKOPƆN NSIW AMANEHUNU ANO
ADƐN NTI NA YEHOWA ATWƐN AKYƐ SAA?
ONYANKOPƆN DE WO PƐ AMA WO—DƐN NA WODE BƐYƐ?
Dɛn Nti na Onyankopɔn Bɔɔ Asase?Dɛn na Bible Kyerɛkyerɛ Ankasa?
Adɛn Nti na Onyankopɔn Bɔɔ Yɛn Baa Asase So?Dɛn na Yebetumi Asua Afi Bible Mu?
1, 2. Asɛm bɛn na nnipa pii taa bisa?
ASASEWOSOW bi sii po mu ma etwiw faa akuraa bi so sɛee no pasaa. Onipabɔnefo bi twee tuo bɔ wuraa asɔredan mu, na okunkum nnipa bebree pirapiraa ebinom. Kokoram yare akum ɔbaatan bi ama ne mma nnum ayɛ nnyanka.
2 Bere biara a asiane anaa atoyerɛnkyɛm bi a ɛte saa besi no, nnipa taa bisa sɛ, “Ɛbaa no sɛn?” Nkurɔfo pii nhu nea enti a ɔtan ne amanehunu ahyɛ wiase ma saa. Wo nso woadwen ho pɛn?
3, 4. (a) Nsɛm bɛn na Habakuk bisaa Yehowa? (b) Mmuae bɛn na Yehowa de maa no?
3 Wohwɛ Bible mu a, wubehu sɛ Onyankopɔn asomfo bi a na wɔn gyidi yɛ den mpo bisaa nsɛm a ɛte saa. Wɔn mu baako ne odiyifo Habakuk. Obisaa Yehowa sɛ: “Dɛn nti na woma mihu adebɔne na wokɔ so hwɛ ɔhaw yi? Dɛn nti na adesɛe ne amumɔyɛsɛm wɔ m’anim, na dɛn nti na ɔham ne ntawntawdi abu so yi?”—Habakuk 1:3.
4 Sɛ yɛhwɛ Habakuk 2:2, 3 a, yehu mmuae a Onyankopɔn de maa Habakuk. Afei nso, ɔhyɛɛ no bɔ sɛ obedi ɔhaw no ho dwuma. Yehowa dɔ nnipa paa. Bible ka sɛ: “Odwen mo ho.” (1 Petro 5:7) Sɛ yɛn a yɛyɛ nnipa mpo yɛn ani nnye amanehunu ho a, ɛnde hu sɛ Yehowa de, okyi koraa. (Yesaia 55:8, 9) Ɛnneɛ, yemmisa sɛ: Adɛn nti na amanehunu adɔɔso saa?
5. Dɛn na nyamesom akyerɛkyerɛfo bi ka fa amanehunu ho? Dɛn na Bible no ka?
5 Asɔfo ne nyamesom akyerɛkyerɛfo taa ka sɛ Onyankopɔn pɛ nti na nnipa rehu amane. Ebinom ka sɛ nea ebesi nnipa akwan mu biara, Onyankopɔn ahyehyɛ ato hɔ dedaw, na ɔno nko ara na onim nea ɔreyɛ. Ebinom nso wɔ hɔ a, obi wu a, sɛ ɔyɛ abofra oo, ɔpanyin oo, wɔka sɛ ɔkɔ Onyankopɔn nkyɛn wɔ soro. Nanso ɛnyɛ saa na asɛm no te. Ɛnyɛ Yehowa na ɔde nneɛma bɔne ba yɛn so. Bible ka sɛ: “Ɛmpare nokware Nyankopɔn sɛ ɔbɛyɛ bɔne, ne ade nyinaa so Tumfoɔ sɛ ɔbɛyɛ nea ɛnteɛ!”—Hiob 34:10.
6. Amanehunu a ɛrekɔ so no, adɛn nti na nnipa pii de ho sobo bɔ Onyankopɔn?
6 Amanehunu a ɛrekɔ so wɔ wiase no, nnipa pii de ɛho sobo bɔ Onyankopɔn, efisɛ wosusuw sɛ ɔno na odi wiase so. Nanso yesuae wɔ Ti 3 sɛ Satan Ɔbonsam na odi wiase yi so.
7, 8. Adɛn nti na amanehunu adɔɔso wɔ wiase saa?
7 Bible ma yehu sɛ “wiase nyinaa da ɔbɔnefo no tumi mu.” (1 Yohane 5:19) Satan a ɔredi wiase yi so no, ɔyɛ otirimɔdenfo a onni ahummɔbɔ koraa. Ɔno na “ɔredaadaa asase sofo nyinaa.” (Adiyisɛm 12:9) Nnipa pii resuasua no. Wei ne ade baako nti a atorodi, ɔtan ne atirimɔdensɛm adɔɔso wɔ wiase saa.
8 Ade foforo nti a amanehunu adɔɔso wɔ wiase ne sɛ, Adam ne Hawa asoɔden nti, wɔde bɔne awo nnipa nyinaa. Enti onipa di ne yɔnko nipa bɔne. Ebinom yɛ wɔn ho akatakyi, na ɛde ntɔkwaw ne nhyɛso na ɛba. (Ɔsɛnkafo 4:1; 8:9) Ɛtɔ da nso a, nea ɛma nnipa hu amane ne sɛ “asiane to wɔn . . . bere a wɔnhwɛ kwan.” (Ɔsɛnkafo 9:11) Ɛmfa ho baabi a yɛwɔ no, akwanhyia betumi ato obiara bere a n’ani nna.
9. Adɛn nti na yebetumi aka sɛ biribi pa bi nti na Yehowa ama amanehunu rekɔ so?
9 Ɛnyɛ Yehowa na ɔde amanehunu ba yɛn so. Akokoakoko, abɔnefosɛm ne nhyɛso a ɛrekɔ so no, yentumi mfa ɛho sobo mmmɔ Onyankopɔn. Ɛnyɛ ɔno na ɔma atoyerɛnkyɛm te sɛ asasewosow, mframa gyampantrudu, ne nsuyiri ba. Nanso ebia wubebisa sɛ, ‘Sɛ Yehowa ne tumi nyinaa wura a, ɛnde adɛn nti na nneɛma bɔne a ɛrekɔ so no, onsiw ano?’ Bible ma yehu sɛ Onyankopɔn dwen yɛn ho paa, enti sɛ wama kwan ama amanehunu rekɔ so a, wunnye nni sɛ ɛyɛ biribi pa bi ntia?—1 Yohane 4:8.
10. Asɛm bɛn na Satan ka too Yehowa so?
10 Ɔbonsam daadaa Adam ne Hawa wɔ Eden turo no mu. Satan kae sɛ Onyankopɔn nni nnipa so yiye. Ɔkyerɛɛ sɛ Onyankopɔn de nneɛma pa bi asie Adam ne Hawa. Ná Satan pɛ sɛ wonya adwene sɛ ɔno bɛyɛ ɔhempa asen Yehowa, na afei nso wonhia Onyankopɔn wɔ wɔn abrabɔ mu.—Genesis 3:2-5; hwɛ Nsɛm Bi Mu Nkyerɛkyerɛmu 27.
11. Asɛm bɛn na ehia sɛ yenya ho mmuae?
11 Asoɔden nti Adam ne Hawa sɔre tiaa Yehowa. Wonyaa adwene sɛ enhia sɛ obi kyerɛ wɔn nea wɔnyɛ; wɔn ankasa betumi asisi wɔn gyinae. Yehowa bɛyɛ dɛn ama ada adi sɛ ɔno na ɔfata sɛ ɔkyerɛ nnipa nea eye ne nea enye, na ɛnyɛ atuatewfo no?
12, 13. (a) Adɛn nti na Yehowa ansɛe atuatewfo no amonom hɔ ara? (b) Adɛn nti na Yehowa maa Satan kwan sɛ onni wiase so na nnipa nso nni wɔn ho so?
12 Yehowa ansɛe Adam ne Hawa amonom hɔ ara. Mmom, ɔmaa Adam ne Hawa kwan ma wɔwoo mma. Ɛno maa Adam ne Hawa asefo nyaa hokwan a wɔde bɛkyerɛ nea wɔpɛ sɛ odi wɔn so. Nanso Yehowa bɔɔ asase sɛ nnipa a bɔne biara nni wɔn ho nhyɛ so mã. Enti Ɔbonsam twe ne mu tann a, nea Yehowa aka no bɛba mu.—Genesis 1:28; Yesaia 55:10, 11.
13 Bere a Satan sɔre tiaa Yehowa no, na abɔfo mpempem huhaa ani tua nea na ɛrekɔ so no. (Hiob 38:7; Daniel 7:10) Enti Yehowa maa Satan bere sɛ onni wiase so na yɛnhwɛ nea ebesi. Afei nso, Onyankopɔn gyaee nnipa sɛ Satan nkyerɛ wɔn kwan mma wɔnhyehyɛ wɔn aban nhwɛ sɛ ɛbɛkɔ yiye ama wɔn anaa.
14. Wohwɛ sɛnea nneɛma akɔ so fi Adam bere so abesi nnɛ a, dɛn na ada adi?
14 Mfe mpempem pii ni, nnipa ayɛ ara sɛ wobedi wɔn ho so, nanso wɔtare a na awae. Biribiara kyerɛ sɛ Satan yɛ ɔtorofo. Anokwa, sɛ Onyankopɔn nsa nnim a, nnipa ntumi nyɛ hwee. Odiyifo Yeremia kae a ɔmmoa sɛ: “O Yehowa, minim sɛ ɔdesani kwan nni ne nsam. Enni onipa nsam, sɛnea ɔnam a obetutu n’anammɔn.”—Yeremia 10:23.
15, 16. (a) Adɛn nti na Yehowa ama amanehunu akɔ so bere tenten saa? (b) Ɔhaw a Satan akɔfa aba wiase no, adɛn nti na Yehowa nyɛɛ ho biribi?
15 Adɛn nti na Yehowa ama amanehunu atena hɔ akyɛ saa? Adɛn nti na nneɛma bɔne a ɛrekɔ so no, onsiw ano? Ná Onyankopɔn pɛ sɛ yehu sɛ Satan tumidi ntumi mmoa yɛn, nanso na ɛnyɛ da koro asɛm. Nnipa asɔ tumidi ahorow nyinaa bi ahwɛ, nanso ankosi hwee. Ɛwom, ɛba nyansahu ne mfiridwuma a, nnipa anya nkɔanim paa, nanso nnɛ koraa na ntɛnkyea, ohia, nsɛmmɔnedi, ne akokoakoko abu so. Enti sɛ Onyankopɔn nsa nnim a, yɛrentumi nni yɛn ho so mma ɛnyɛ yiye.
16 Ɛnde adɛn nti na amanehunu a Satan asoa agu nnipa so no, Yehowa nyɛɛ ho hwee? Nea ɛte ne sɛ ɔde ne nsa ka pɛ, ɛbɛyɛ sɛ nea ɔreboa Satan ama ne tumidi agyina, nanso Onyankopɔn renyɛ saa da. Afei nso, sɛ Onyankopɔn de ne ho gye mu ma nneɛma yɛ yiye a, ɛbɛma nnipa anya adwene sɛ wɔn ankasa atumi adi wɔn haw so. Nanso na ɛnte saa. Yehowa deɛ, yenim sɛ onni atoro, enti ɔremmoa biribi a ɛte saa.—Hebrifo 6:18.
17, 18. Nneɛma a Satan asɛe no no, dɛn na Yehowa bɛyɛ wɔ ho?
17 Ɔhaw ne abɛbrɛsɛ a Satan ne nnipa atuatew akɔfa aba no, Yehowa betumi asiesie anaa? Obetumi paa, efisɛ Onyankopɔn deɛ, biribiara nso no yɛ. Nanso asɛm a Satan akɔfa aba no, Yehowa na onim bere a emu nokware nyinaa bɛda adi. Sɛ asɛm no nyinaa si a, Yehowa bɛma asase no adan Paradise sɛnea na wabɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ no. Afei nso, wɔn a wɔwɔ “nkae ada” mu nyinaa bɛsɔre afi awufo mu. (Yohane 5:28, 29) Obiara renyare na obiara nso nwu. Yehowa bɛma Yesu asɛe “Ɔbonsam nnwuma” nyinaa. Biribiara a Satan asɛe no no, Yesu bɛyɛ no yiye. (1 Yohane 3:8) Yɛda Yehowa ase sɛ wanya yɛn ho abotare, efisɛ ama yɛanya kwan resua ne ho ade na yɛakyerɛ sɛ yegye no tom sɛ yɛn Hene. (Kenkan 2 Petro 3:9, 10.) Sɛ yɛrehu amane mpo a, Onyankopɔn boa yɛn ma yegyina ano.—Yohane 4:23; kenkan 1 Korintofo 10:13.
18 Yehowa nhyɛ obiara sɛ onnye no ntom sɛ ne Hene. Ɔde obiara pɛ ama no. Wei yɛ akyɛde a ɛso bi nni. Ma yɛnhwɛ nea wubetumi de saa akyɛde no ayɛ.
19. Akyɛde kɛse bɛn na Yehowa de adom yɛn? Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛkyerɛ ho anisɔ?
19 Yɛn pɛ a Yehowa de ama yɛn nti, nsonsonoe kɛse da yɛne mmoa ntam. Mmoa nnwen, atenka na wɔde yɛ biribiara. Nanso nnipa de yetumi yɛ nea yɛpɛ, enti yɛbɛsom Yehowa oo, yɛrensom no oo, ɛwɔ yɛn nsam. (Mmebusɛm 30:24) Yɛnte sɛ afiri, enti nea yɛpɛ sɛ yɛyɛ yɛn ho biara no, yetumi yɛ. Yetumi bɔ yɛn bra sɛnea yɛpɛ, na yɛfa nnamfo nso a yɛpɛ. Yehowa pɛ sɛ yɛn ani gye.
20, 21. Dɛn na wubetumi de wo pɛ ayɛ nnɛ?
20 Yehowa pɛ sɛ yɛdɔ no. (Mateo 22:37, 38) Ayɛ sɛ agya bi ne ne ba; sɛ abofra no ara yɛ biribi de kyerɛ sɛ ɔdɔ ne papa a, ɛyɛ papa no fɛ. Saa ara na Yehowa te, ɔmpɛ sɛ ɔhyɛ yɛn ma yɛdɔ no. Sɛ yɛbɛsom no oo, yɛrensom no oo, ogya ma yɛn. Satan ne Adam ne Hawa deɛ, wosii gyinae sɛ wɔrensom Yehowa. Wo nso ɛ, akyɛde kɛse a wowɔ no, wode bɛyɛ dɛn?
21 Yehowa de wo pɛ ama wo, enti fa som no. Nnipa mpempem pii apo Satan, na wɔreyɛ nea Onyankopɔn pɛ. (Mmebusɛm 27:11) Yɛahu sɛ Onyankopɔn wiase foforo no ba a, obeyi amanehunu nyinaa afi hɔ. Dɛn na wubetumi ayɛ seesei na ama woanya kwan akɔ mu bi? Ti a edi hɔ no bɛma yɛn ho mmuae.
NOKWASƐM 1: AMANEHUNU BIARA NNI HƆ A EFI YEHOWA
“Ɛmpare nokware Nyankopɔn sɛ ɔbɛyɛ bɔne, ne ade nyinaa so Tumfoɔ sɛ ɔbɛyɛ nea ɛnteɛ!”​—Hiob 34:10
Adɛn nti na amanehunu adɔɔso wɔ wiase saa?
Satan Ɔbonsam na odi wiase so.
Onipa di ne yɔnko nipa bɔne.
Ɛtɔ da a, nea ɛma nnipa hu amane ne sɛ akwanhyia to wɔn bere a wɔn ani nna.
Yehowa dɔ nnipa paa, enti ɔmpɛ sɛ wobehu amane.
NOKWASƐM 2: SATAN KASA TIAA ƆKWAN A YEHOWA FA SO DI NNIPA SO
“Onyankopɔn nim sɛ . . . mo ani bebue na moayɛ sɛ Onyankopɔn ahu papa ne bɔne.”​—Genesis 3:5
Asɛm a Satan kɔfa bae no, adɛn nti na Yehowa ammu n’ani angu so?
Satan kae sɛ Onyankopɔn nni nnipa so yiye. Satan pɛ sɛ yenya adwene sɛ enhia sɛ obi kyerɛ yɛn nea yɛnyɛ; yɛn ankasa betumi asisi wɔn gyinae.
Bere a Satan sɔre tiaa Yehowa no, na abɔfo mpempem huhaa ani tua nea ɛrekɔ so no.
NOKWASƐM 3: SATAN NSA ASI FAM
“Enni onipa nsam, sɛnea ɔnam a obetutu n’anammɔn.”​—Yeremia 10:23
Adɛn nti na nnipa ahu amane akyɛ saa?
Nnipa asɔ tumidi ahorow nyinaa bi ahwɛ, nanso Onyankopɔn nsa nnim enti, ankosi hwee.
Yɛda Yehowa ase sɛ wanya yɛn ho abotare efisɛ ama yɛanya kwan resua ne ho ade, na yɛakyerɛ sɛ yegye no tom sɛ yɛn Hene.
Yehowa bɛma Yesu asiesie nneɛma a Satan asɛe no no nyinaa.
NOKWASƐM 4: YEHOWA DE WO PƐ AMA WO—FA SOM NO
“Me ba, yɛ onyansafo, . . . na manya asɛm abua nea otwa me mpoa.”​—Mmebusɛm 27:11
Adɛn nti na Yehowa nhyɛ yɛn sɛ yɛnsom no?
Mmoa nnwen, atenka na wɔde yɛ biribiara. Nnipa deɛ, Yehowa de yɛn pɛ ama yɛn. Yɛbɛsom no oo, yɛrensom no oo, ogyaw ma yɛn.
Yehowa pɛ sɛ yefi yɛn komam som no.